"Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin’ny andro rehetra." Ohabolana 17:17
"Izay efa mivarahontsana dia tokony hiantran’ny sakaizany." Joba 6:14
"Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany." Jaona 15:13
Te hanana namana maro ve ianao? Misy tambazotram-pifandraisana iray ao amin’ny internet, manolotra izany araka ny teny filamatra apetrany hoe “ny naman’ny namanao dia namanao ihany koa”. Amin’izany no ananana “fianakaviana” mpinamana lavitra akaiky, izay tsy fantatra ny ankamaroany! “Namana” hoe? Izany tokoa ve? Indro tranga ratsy iray, manasongadina izany fanontaniana izany : nisy zazavavy Anglisy nilaza mialoha tamin’ireo namany 1048 tao amin’ny “Facebook”, fa hamono tena izy. Tamin’ny andro nolazainy dia maty izy, nihinana fanafody be dia be, nefa tsy nisy nanao na inona na inona ireo “namany”!
Ny Baiboly dia manoritra ny toetran’ny tena namana marina :
— Ny namana dia mahatoky, na amin’ny andro tsara na amin’ny andro ratsy (Ohabolana 17:17).
— Ny namana dia afaka manonitra ny fahalaviran’ny fianakaviana, ary ny fisakaizana dia tsy mijery elanelan-taona (Ohabolana 27:10).
— Ny namana dia tsy mivadika ary mahitsy: raha hahasoa ny namany, dia tsy misalasala izy manao tsikera, na dia mety ho sarotra ekena aza izany (Ohabolana 27:6).
— Ny namana dia mendri-pitokisana, olona ifampizarana tsiambaratelo (Ohabolana 17:9).
— Ny namana dia feno fitsinjovana sy fangorahana (Joba 6:14).
— Ny fisakaizana dia mahasoa ny fanahy (Ohabolana 27:9).
Tsy misy manana fitiavana lehibe noho ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany, hoy Jesosy. Izy aza nanao mihoatra lavitra noho izany, satria nahafoy ny ainy ho an’ny fahavalony. Ny nanolorany ny ainy no mahavonjy olona tahaka antsika, raha mibebaka izy ireo. Io fitiavana tsy hay alain-tahaka io no nahatonga an’i Jesosy Kristy hiharan’ny famaizan’Andriamanitra, tamin’Izy nisolo toerana antsika. Iza no nitia antsika tahaka Azy?